King Tsuro ndeye vhiki ino yemahara app | IPhone nhau
Vhiki rapfuura uye Apple iri kutipa iyo yemahara kunyorera zvakare kusvika svondo rinouya. Ino nguva mutambo unonzi King Rabbit yatichazofanira kugadzirisa zvakasiyana mapipi kuti tinosangana mukushanya kwedu. Isu tiri Mambo Tsuro uye chatinofanirwa kuita kuponesa mamwe mabhanzi tichiunganidza hupfumi hunoonekwa.
Iwo anotonga aMambo Tsuro ari nyore kwazvo: iyo bunny iri ichafamba munzira yatinotsvedza chigunwe chako pane chero poindi pachiratidziri. Neminwe miviri tinogona kufambisa mepu kuti tizive zvatichazowana munzira yedu mune imwe nhanho. Asi nekuda kwekuti madhiraivho ari nyore hazvireve kuti mutambo zvakare. Kunge chero mutambo wepuzzle unokosha munyu wawo, mushure mekupfuura iwo ekutanga matanho sedzidziso, zvinhu zvinowedzera kuwedzera kuomarara uye isu tichafanirwa kutora pfungwa dzedu kuti dzipfuure mamwe mazinga.
King Tsuro, kununura mabhunza uye kuunganidza hupfumi
Muna King Tsuro isu tichafanirwawo kuenda kunzvenga zvipingamupinyi, iyo iyo inogona kutibatsira kutamisa mamwe mabhokisi, semuenzaniso, kukwanisa kuyambuka pamusoro pemvura. Tichasanganawo nemabhomba, anozotibvumidza kuparadza madziro kana isu pachedu kana tikasafamba kuenda munguva. Uye zvakare, isu tichawanawo mamwe marudzi ezvipingamupinyi, senge kutenderera saga kana vavengi vanozotenderera mepu kutadzisa kufambira mberi kwedu.
Kana ndichifanira kutaura chokwadi, Mambo Tsuro akandishamisa chaizvo, asi pane chinhu chimwe chandisingafarire zvachose: kuve mutambo unofanirwa kubhadhara, ndinofunga haugone kuratidza chizere chinozivisa kushambadzira nhanho dzese shoma, chimwe chinhu chingaite kuti tinete uye tigopedzisira tachiisa. Chero zvazvingaitika, ini ndinofunga zvakakodzera kuirodha pasi uye nekuibatanidza kune yedu Apple ID, pane izvo zvinogona kuitika
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » King Tsuro, unovaraidza pikicha mutambo seapp yevhiki